အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ ပိုပိုရဲ့ ခရစ်စမတ်သီချင်းလေး
အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ ပိုပိုရဲ့ ခရစ်စမတ်သီချင်းလေး အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့မှာ ခရစ္စမတ်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသီချင်းလေးကတော့ အခု ခရစ္စမတ်ရာသီလေးမှာ အေးမြတဲ့ အချစ်တွေအတွက် မေတ္တာတွေဖွဲ့သီထားတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ ဒီသီချင်း MTV လေးဟာ ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်(၁၀)သိန်းကျော်တဲ့အထိကို ရှိနေပြီး ပရိသတ်တွေသဘောကျနှစ်သက်နေတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။ […]
ကားရေထဲ နစ်သွားရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ
ကားရေထဲ နစ်သွားရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ ကားမောင်းသူတိုင်း ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ကားရေထဲ နစ်သွားရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲကားရေထဲနစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ Tipsတွေဖတ်ဖူးတယ်။ မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောပြရရင် ကားရေထဲနစ်ချိန်မှာ အသက်ဘေးကလွတ်ဖို့ အချိန်တစ်မိနစ်ခွဲပဲရပါတယ်။ ကားရေထဲကျတာသိသိချင်း ခါးပတ်ကိုအရင်ဖြုတ်ပါ။ ကားတံခါးကိုလုံးဝမဖွင့်ပါနဲ့။ ရေဖိအားကြောင့် ဖွင့်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ကားမှန်နေရာကနေပဲ ထွက်ဖိုကြိုးစားပါ။ ကားမှန်တွေတင်ထားရင် ကားမှန်တွေကိုချပါ။ ကားမှန်တံခါးတွေ […]
“လေမဖြတ်ချင်ရင် နေ့စဉ်စားပါ” ဒီနည်းကို ပေးခဲ့သူက တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဦးမြင့်သိန်း(လှိုင်သာယာ)ဖြစ်ပါတယ်။လေကအောက်ကိုဆင်းရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။ အထက်ကိုလေပူဆန် လာရင်မကောင်းပါဘူး။လေလည်ပြီးအောက်ကို ဆင်းစေဖို့”နရသုခ”ဆေးကျမ်းမှာပါတဲ့နည်းကို ပေးပါ့မယ်။ ပဲကြီးလှော်(၁၀)စေ့ကို အခွံခွာပြီး ကြက်သွန်ဖြူ(၁)မွှာနဲ့ နေ့စဉ်စားပေးရင် လေပူလည်း အထက်ကိုမဆန်ဘူး။လေကအောက်ကို ဆင်းပါတယ်။ လေအသွားအလာမှန်တဲ့အတွက် လေဖြန်းမှာ လေဖြတ်မှာမစိုးရိမ်ရပါဘူး။နေ့စဉ် စားပေးရပါမယ်။ Credit:ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး […]
မော်လမြိုင်မြို့မှ ဒေါက်တာအေးဇော်ထန်းရဲ့ကားနဲ့ DBကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု ရုပ်သံဖိုင်
မော်လမြိုင်မြို့မှ ဒေါက်တာအေးဇော်ထန်းရဲ့ကားနဲ့ DBကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု ရုပ်သံဖိုင် သေဆုံးသွားသော ဆရာဝန်မှာ အရက်မူ၍ ကားမောင်းသောကြောင့် ကားမှာ မြစ်အတွင်းထိုးကြကာ ကလေးရောအဖေပါ အသက်ဆုံးရှူံးသွားတာ ဖြစ်နိူင်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆရာဝန်ပြောပြ၍သိရပါတယ် အရက်မူ ရင် ကားမမောင်းကြပါနဲ့နော်။ ဘ၀အတွက်ကောင်းကြိုးမပေးတဲ့ အရက်ကို သောက်သုံးမိတဲ့အတွက် အခုအခါမှာတော့ စိတ်မကောင်းစရာတွေဖြစ်ခဲ့ရပီ။ လူမမယ်ရင်သွေးငယ်လေးရဲ့ […]
ဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းတို့သားအဖနှစ်ယောက်ဘာ့ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ကြလဲ မော်လမြိုင်မြို့မှပျောက်ဆုံးနေသောဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းတို့သားအဖနှစ်ယောက်မောင်းနှင်လာသောကားမှာ အမူးလွန်၍အတ္ထရံမြစ်ထဲသို့ထိုးဆင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်. 😥😥 ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တော့ သေမှုသေခင်းမတော်တဆမှုဘဲဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်..တစ်ကယ်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ် (၅) ရက်နေ့ကတည်းကမော်လမြိုင် မြို့ မျှော်လင့် (၁) ရပ်ကွက် ညောင်ပင်ဆိပ် ၊ မျှော်လင့်လမ်းမကြီးဘေးတွင်နေထိုင်သောဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းနဲ့ သုံးနှစ်သားရင်သွေးငယ်တို့ဟာ ညအချိန်စားသောက်ဆိုင်မှအပြန်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှအပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခြဲ့ ကပေမယ့်လည်းရှာမတွေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး CCTV မှတ်တမ်းများအရ အတ္ထရံမြစ်ထဲကို ရေငုပ်ရှာဖွေဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရာမှ […]
ဘုန်းဘုရားကြီးဘိုးပေါက်ဆိန် ပထမံထွက်ရပ်ပေါက် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအကြောင်းကိုရေးသားကြရာတွင်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီများ၏ မိဘမျိုးရိုး|မိဘအမည်| မွေးဖွားရာဇာတိ| မွေးဖွားသည့်ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တို့ကို ဖော်ပြလေ့ရှိကြသော ဘုန်းဘုရားကြီးဘိုးပေါက်ဆိန်အကြောင်းကို ရေးသားဖေါ်ပြကြရာတွင်အထက်ပါအထက်ပါအကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိကြပေ။ ဘုန်းဘုရားကြီး ဘိုးပေါက်စိန် (ခေါ်) ဦးဝိဇ္ဇာဓရ၏ပေါက်စေတီတော်တွင် အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်တိုင်း ” အောင်ပွင့်ပူဇော်ပွဲ ” (ခေါ်) ပန်းပွင့်ရေချမ်းအမွှေးတိုင်နှင့် ကန်တော့ပွဲများကို နိစ္စဘတ်ဝတ်တခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကာကြီးမှူ […]
အားလုံး ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာ ဆရာဝန်ကော ကလေးရဲ့ အလောင်းကော ကားထဲမှာပါပဲဗျာ ရုပ်သံဖိုင်
အားလုံး ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာ ဆရာဝန်ကော ကလေးရဲ့ အလောင်းကော ကားထဲမှာပါပဲဗျာ ရုပ်သံဖိုင် 19 ရက်တာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဆရာဝန် သားအဖရဲ့ ပဟေဠိကတော့ ဒီနေ့မှာ အဖြစ်မှန် အကုန်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ အရာ အားလုံး ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဗျာ ။ မဖြစ်နိုင်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းခဲ့ပေမယ့် ဆုတောင်း မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ […]
ကှမျးရှကျရဲ့ အရငျး နဲ့ အဖြားကို ဘာကွောငျ့ဖွတျပဈရသလဲ…?
ကှမျးရှကျရဲ့ အရငျး နဲ့ အဖြားကို ဘာကွောငျ့ဖွတျပဈရသလဲ…? တမ်ဗုလဿ……ကှမျးရှကျ၏ မဇ်ဈေ…….အလယျဖွဈသော ပတ်တေ……အရှကျ၌ျ သဒါ…….အခါခပျသိမျး ရက်ခတိ…….စောငျ့၏ ။ မူလမှိ……အရငျး၌ျ ယက်ခော…….ဘီလူးသညျ ရက်ခတိ…….စောငျ့၏ ။ အဂ်ဂမှိစ……အဖြား၌လညျး ဒဝေမိစ်ဆာ…….နတျယုတျမာသညျ ရက်ခတိ…….စောငျ့၏ ။ တသ်မာ…….ထို့ကွောငျ့ တာနိ…….ထိုအရငျးအဖြားတို့ကို ဆိန်ဒိတှာ…….ဖွတျ၍ ဘုဉ်ေဇယြ……..စားရာ၏ ။ ဧဝံ……..ဤသို့ […]
“တံမြက်စည်းလှည်းခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုး (၂၁) ပါး”
“တံမြက်စည်းလှည်းခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုး (၂၁) ပါး” တံမြက်စည်းလှည်းခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုး (၂၁) ပါးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁။ စိတ်နောက်ကျုမှု မရှိခြင်း၊ ၂။ စိတ်ဓာတ် စင်ကြယ်ခြင်း၊ ၃။ အခါခပ်သိမ်း စိတ်ထားဖြူစင်ခြင်း၊ ၄။ စိတ်ကို ပူလောင်စေတတ်သည့် လောကတည်း ဟူသော ငြောင့် […]
ပုတီးကုံး၁၀၈လုံး၏အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရေ စ ကြို အ ရှင်ဧ သိ က၊ စစ်တမ်း စာ ၁၅၆ ရဲ့စိပ်ပု တီး ပြဿနာ အ ဖြေ ရှာ ဆို တဲ့ ဆောင်းပါး လေး မှာ မြန် မာ စိပ် […]